तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पक्रा`उ पर्न सक्ने !
काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले हा’‘नेको गो‘लीबाट मृ`त्यु भएको घ`टनामा प्रहरीले नै जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ। न्या`याधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जा`हेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न हालै आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै दुई वर्ष पहिलेको यो जाहेरी पुनः अगाडि बढाउनु पर्ने बा`ध्य`ता प्रहरीलाई आइलागेको छ। अब प्रहरीले जा`हेरी द`र्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने निवेदकका का`नुन व्यवसायी इन्द्रप्रसाद अर्यालले बताए।
‘अ`दा`लतको आ`देशसँगै सात दिनभित्रमा जा`हेरी दर्ता हुन्छ। जा´हेरी द´र्ता भइसकेपछि ज्या’न मु´द्दामा अनु´स´न्धान गरेर दो´षीलाई मु`द्दा चलाउनु पर्ने हो,’ अर्यालले भने, ‘त्यहाँसम्म पुग्लान् भन्ने लागेको छैन। अब अनुसन्धानलाई छ`ल्ने उपा`य अप´ना´उन खोज्छन्। हामी निरन्तर फ`लोअ`प गरेर दो`षीलाई जो`गाउन दिँदैनौँ।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरु`द्ध जा`हेरी द`र्ता हुने भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चा`र्ज कुमार पौडेल वि’वादा’स्पद इ’न्का’उ’न्टर मा मा’रि’एका थिए।
उनी मा’रि’एपछि परिवारका सदस्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता गर्न गएका थिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वो`च्च अदा`लतमा जाहेरी दर्ताको आदेश माग्दै रि`ट निवेदन दर्ता गराइएको थियो।
असोज १२ मा सर्वो´च्च अदा´लतले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी अनुस`न्धान गर्न आदेश गरेको हो। रिट निवेदक दुर्गादेवी पौडेलले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई समेत विपक्षी बनाई रि`ट निवेदन द`र्ता गराएकी थिइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मु`द्दामा आ`देशको सू`चना पाएको सात दिनभित्र जाहेरी द`र्ता गर्न सर्वो`च्चले आ´देश दिएको हो। २०७६ असार ५ गते प्रहरीको गो’ ‘लीबाट मा’रि’एका नेत्रवि`क्रम चन्द वि`प्लव नेतृ`त्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वो`च्च अदा`लतले आदेश दिएको छ।
जाहेरीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीको सं’ल’ग्नता रहेको दा`बी गरिएको छ।
यस्तै जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, सोही कार्यालयमा कार्यरत हवल्दार विनोद शाह, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाममा पनि किटानी जाहे`री छ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यतिबेला दिइएको जाहे`रीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा भएको भनिएको छ। सं’लग्नको ब`यानबाट खुलेपछि सोही अनुसार सं’लग्नहरुलाई सजा`य गर्न माग गरिएको छ।
मधेस जनआ`न्दो`ल`नको बेला चु`रे भावर पार्टीको सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष भएका पौडेल पछिल्लो समय विप्लवले नेतृ`त्व गरेको नेकपामा आ’वद्ध थिए। तर उनी भूमिगत थिएनन्। २०७५ जेठ बाटै उनले आफूमाथि स्थानीय प्रहरीले निगरानी बढाएको आफन्तसँग बताउँथे।
घ`टनाभन्दा केही पहिले उनलाई सुरक्षित रहन सीडीओले नै आग्रह गरेको परिवारको जाहेरीमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रहरीले पनि ख`तरा हुनसक्ने भन्दै केही समय जिल्लाबाहिर बस्न सुझाव दिएका थिए। तर, कुमारले प्रहरीले नमा’र्ने र पक्रा`उ मात्रै गरे राजनीतिक उचाइ बढ्ने बताउने गरेका थिए।
घट`नाको अघिल्लो दिन पिपलडाँडास्थित अमर घ´ला´नको घरमा बास बसेका थिए उनी। घ`टनाको बिहान मित पूर्ण रानाको घरमा बसेको र दिउँसो ४ बजे घर आउँछु भनेका थिए। मितको घरमै बसिरहँदा सादा पोसाकका प्रहरी आएको सुइँको पाएपछि उनले त्यहाँबाट जाने तयारी गरे। त्यहाँबाट निस्किँदा कुमारको बाइकको पछाडी एकजना र अर्को बाइकमा दुई जना पनि सँगै निस्किएका थिए।
‘जंगलको बीचमा बाइक रोकेर ओर्लिन लाग्दा दुई जना सादा पोसाकका प्रहरीले क’न्चटमा पे’स्तो’ल ताक्दै तँ कुमार पौडेल होस् भनेर सोधे। कुमारले होइन भनेपछि मास्क खोल्न लगाए। प्रहरीले चिनेपछि तँ बाइकबाट झर् भनेर हात माथि ग’र्दनमा लगाई भुइँमा घुँडा टे’केर घो’प्टो पर्न लगाएर गो‘ली प्र’हा’र गरे,’ दुर्गादेवीको जाहेरीमा भनिएको छ।
उनीसँगै बाइकमा गएका व्यक्ति भने त्यही क्रममा भा’गे। घटना हुनुभन्दा केही दिन पहिलेबाटै त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको च`हलप`हल बढेको थियो। घ`टनाको दिन बिहान स्थानीयलाई माटो लिन जाँदा पनि जंगलमा ह’रि’ण मा’र्न लागेको छ भन्दै रोकिएको थियो। कुमारका भाइ हरिकृष्ण दिउँसो ३ बजेतिर घ`टनास्थल पुगे।
घ`टनास्थलमा ला’स र प्रहरी दुवै थिएनन्। त्यसपछि उनी लालब`न्दी इलाका प्रह`री कार्यालय पुगे। त्यहाँ दुई तीन जना मात्रै प्रहरी थिए। उनीहरुले घ`टना त्यहाँका प्रहरीबाट नभएको बताएपछि हरिकृष्ण नवलपुर प्रहरी कार्यालय पुगे।
त्यहाँका प्रहरीले पनि हामीले मा‘रेको होइन भनेर जवाफ दिए। त्यसक्रममा प्रहरीसँग उनको लफडा प¥यो। पछि उनी घर फर्किए। असार ८ गते सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र निष्पक्षको छानबिनको माग गर्दै परिवार र आफन्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। त्यतिबेला प्रदेश नं २ कार्यालयबाट
मानवअधिकार आयोगको टोली पनि त्यहाँ पुगिसकेको थियो। सुरुमा प्रहरीले दोहोरो भि’डन्तमा मा’रिएको लेखेको कागजातमा सनाखत गर्न द’बाब दियो। तर, हरिकृष्णले अस्वीकार गरे। पछि प्रहरी का`रबा`हीमा मा’रि’एको भनेपछि मात्रै उनले शव बुझ्ने सहमति गरे। ताजा खबर बाट
२०७८ आश्विन १६, शनिबार १५:२०0Minutes 199 Views